I-china i-Wall-mounted Yinyitong self-service terminal Manufacturers, abaxhasi, abaFektri -iNtelekelelo -I-Shenzhen JAK Medical Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Oogqirha besilivere Oogqirha besilivere > Isiphelo sendlela yokuzenzela inkonzo yaseYinyitong
I-yinyitong yesistim sokuzenzela esisebenza eludongeni ixhasa ukugcwaliswa kwakhona kwenkonzo, ukuqeshwa, ukubhaliswa, ukuhlawulwa, ukushicilelwa koluhlu, ukushicilelwa kwe-invoyisi kunye noshicilelo lwengxelo yokuqonda.
I-yinyitong sel-eludongenif-yenkonzo,ixhasa ukuzenzela inkonzo ngokwakho, ukuqeshwa, ukubhaliswa, ukuhlawula, ukuprinta uluhlu, ukushicilela i-invoice kunye noshicilelo lwengxelo yokuqonda isifo.
Njengesixhobo sokugcina iinkonzo, i-JAK-800H inokulungiswa kwinqanaba eliphezulu, inqabile kwishishini.SDP-7E idibanisa umsebenzi wokubona ubuso, inokubonelela abaguli ngokugcwalisa kwakhona, ukuqeshwa, ukubhalisa, ukuhlawula, ukushicilela uluhlu nezinye izinto ezingezizo. -ukufumanisa isifo kunye nezinto zonyango, ukunceda abaguli bakugqibe ngokukhawuleza ukuzinceda, kunciphise kakhulu ixesha lokulinda lezigulana kunxibelelwano olungachongiyo kunye nonyango, kunye nokuphucula ngokufanelekileyo umgangatho wenkonzo yonyango yasesibhedlele.
1. Isixhobo esinye sinokunceda abaguli bagqibezele uninzi lweenkqubo ezingachongiyo kunye nonyango ngokwabo, kwaye ukubonakala, iimodyuli ezisebenzayo kunye ne-UI interface zingenziwa ngokwezifiso.
Ngokusekwe kwimeko eyiyo yesibhedlele, ukusuka kwinkangeleko ukuya kwi-interface, ukusuka kwizixhobo zokusebenza ukuya ekusebenzeni, ukufezekisa ukulungelelaniswa okuphezulu.
3. Amacala asekhohlo nasekunene anokwandiswa ngokweemfuno, ezinokuthi ziqonde ukusebenza kwabantu abathathu kwisithuba esilinganiselweyo kwaye zenze ngcono nangakumbi umgangatho wokusetyenziswa kwezixhobo zesibhedlele.
5. Ukunciphisa ngokufanelekileyo umgama ngokwasemzimbeni phakathi kwamasebe asebenzayo esibhedlele, kunye nokunciphisa ixesha lokuma emgceni kwizigulana ekungafunyaniswa isifo kunye nonxibelelwano lonyango esibhedlele.
Owona msebenzi uphambili
1. Ikhadi lezonyango / ukubhaliswa kwekhadi loKhuseleko lweNtlalo
2. Ukutyunjwa kobhaliso / lobhaliso
3. Jonga / uprinte uluhlu lweentsuku zokulaliswa esibhedlele
Intlawulo yeAlipay, intlawulo ye-WeChat, intlawulo ngekhadi lezonyango / ikhadi lokhuseleko loluntu,
5. Ukukhangela ibhakhowudi
6, umatshini wokutshintsha ixesha
7. Uphando lweprofayili yesibhedlele
8. Uvavanyo lokwaneliseka koogqirha
9. Umsebenzi wokukhawulezisa ilizwi
Iimpawu ezishushu: Ifilimu yonyangoï¼ŒUmshicileli woNyangoI-terminal yeYinyitong enezixhobo zokuzenzela, China, abavelisi, abathengisi, ifektri, ngokwezifiso, ixabiso, ikowuti.